Imisho ye-Rockers Discover ➡️ Thola ku-inthanethi ▷ ➡️
Imishwana ehamba phambili yezingoma zamadwala ngama-rocker amakhulu namaqembu afana no-U2, REM, Kiss, Black Sabath, The Rolling Stones, Led Zeppelin noma Pink Floyd.
1 Imishwana yama-Rockers
2 Rockers futhi metalheads imishwana
3 Imishwana yenjabulo yedwala
4 Rockers imishwana amavidiyo
Kukhona intokazi enesiqiniseko sokuthi konke lokho okucwebezelayo kuyigolide futhi uthenga izitebhisi eziya ezulwini. - Led Zeppelin
Uyemukelwa ehlathini, siyazijabulisa futhi siyadlala. Sinakho konke okufunayo, s'thandwa, siyawazi amagama, singabantu abangathola noma yini oyidingayo. Uma unayo imali, s'thandwa, sinesifo sakho. - Izibhamu N 'Roses
Kunendoda yezinkanyezi elinde esibhakabhakeni, ibingathanda ukuza izosihlangabeza kodwa icabanga ukuthi izingqondo zethu zingaqhuma. - UDavid Bowie
Ngifuna ukuzamazama nokugingqa ubusuku bonke nokuzijabulisa usuku lonke. - KISS
Kuzwakala kanjani Kuzwakala kanjani ukungabi namakhaya? Ukuba wedwa futhi ungenakhaya. Isihambi ngokuphelele, njengetshe eligingqikayo. - UBob Dylan
Uyazi ukuthi ngazalelwa ukulahlekelwa futhi umdlalo wenzelwa amaduma, kepha ngithanda ukuphila kanjalo, mntanami. Ngeke ngiphile phakade! - UMotörhead
Kuyimpilo yami, manje noma cha, ngoba angizukuphila ingunaphakade, ngifuna ukuphila inqobo nje uma ngisaphila. - Bon Jovi
Rockers futhi metalheads imishwana
Woza baby khanyisa umlilo wami - Iminyango
Kuyadonswa izintambo zempi, akekho oqinisile uma wonke umuntu engalungile. - IBuffalo Springfield
Ngifuna nje umuntu athi, "Ngizohlala ngikhona lapho uvuka." Uyazi ngithanda ukugcina izihlathi zami zomile ngakho hlala nami futhi kuzokwenziwa. - Ikhabe eliyimpumputhe
Awukwazi ukubasa umlilo ngaphandle kwenhlansi, ngizimisele ngokushisa noma ngabe sidansa ebumnyameni. - UBruce Springsteen
Uyesaba, impilo yakho isengcupheni, kepha kukhona umuntu okufanele adonse inhlamvu. - Umgoqo
Isizungu siyaphela, imicabango ngawe izinkumbulo nje ... Masingakhali manje ngalokho esilahlekelwa yikho, isikhathi ngeke sikhohlwe ukuthi usho ukuthini kimi. - Winger
Ngiyilihlo lezulu, uma ngikubuka ngiyakwazi ukufunda ingqondo yakho, yimina owenza imithetho yokubhekana neziwula, ngingakukhohlisa. - Iphrojekthi ye-Alan Parsons
Ngazalwa ngikhululekile! Ngikhululekile njengomfula ovuthayo, onamandla njengomoya oshaya ubuso bami uxosha amaphupho futhi ugijimela isikhathi sikababa. - Kid Rock
Unesipho esingabonakali. Uyelula futhi abambe inhliziyo yakho ngokuqinile. - UGenesise
Imishwana yenjabulo yedwala
Ngingumfana oziphethe kahle, ngidinga nje ithoyizi elisha, ngizokutshela, ntombazane: ngidansele. - UMötley Crüe
Umphefumulo osenkingeni ufunda ukundiza. Isimo sakhe singesasemhlabeni, kodwa uzimisele ukuzama. - I-pink Floyd
Sifana kakhulu futhi ngasikhathi sinye sehluke kakhulu, mina ngehlela esihogweni wena uwela epharadesi. - ILoquillo
Ngingumkhumbi-mkhathi osendleleni eya eMars nasendleleni yokushayisana. Ngiyisathelayithi, angisalawuleki Ngingumshini wezocansi olungele ukugcwaliswa kabusha njengebhomu le-athomu elizoqhuma. - Indlovukazi
Sawubona, bumnyama, mngani wami wakudala, ngize ukuzokhuluma nawe futhi. - USimon noGarfunkel
Wayefuna inkululeko iboshwe futhi ibekelwe imingcele, ngazama ukumnika kepha ngiyisigqila. - Muse
Iphathi ayipheli. Awukwazi ukucabanga ngokufa lapho ibhodlela lingumngane wakho omkhulu. - Umugqa weSkid
Yi-cherry pie yami, ngiphuza amanzi amasha, isimanga esikhulu. Inambitheka kamnandi ize ikhale ngisho indoda. Iphayi le-cherry elimnandi! - Ukucinga oda
Sizogibela esiqongweni saleli langa likaJanuwari, sakhe isidleke emagatsheni alo, futhi lapho sizohleka njengoba isandla somzuzu ngamunye sidliwa amagagasi. - Igagasi
Akukho okuhlala njalo futhi sobabili siyazi ukuthi izinhliziyo zingashintsha. Futhi kunzima ukubamba ikhandlela emvuleni ebandayo yangoNovemba. - Izibhamu N 'Roses
Rockers imishwana amavidiyo
Imishwana yabangane bakudala
ISikhism - Yazi le Nkolo Ngemininingwane